Ngawaphi amanyathelo abarhwebi ekufuneka bewathathe ukuze baphumelele kwi-Intanethi | Martech Zone
Inkulungwane yama-21 ikubonile ukuvela kweetekhnoloji ezininzi ezisenza ukuba sithengise ngempumelelo amashishini ngendlela edibeneyo nenempembelelo xa kuthelekiswa nexesha elidlulileyo. Ukusuka kwiiblogi, iivenkile ze-ecommerce, iindawo zentengiso ezikwi-Intanethi ukuya kumajelo eendaba ezentlalo, iwebhu iye yaba yindawo yoluntu yokufumana ulwazi kubathengi ukuba baphande kwaye basebenzise. Ngethuba lokuqala, i-Intanethi idale amathuba amatsha amashishini njengoko izixhobo zedijithali ziye zanceda ukulungelelanisa nokuzenzekelayo iinzame zokuthengisa kumaqonga amaninzi.
Kodwa njengomthengisi kubudala bedijithali, kunokuba nzima kakhulu ukuba uqale ngaphi xa kufikwa ekufumaneni ukuba baphi abathengi bakho kunye nendlela yokunxibelelana nabo.
Ukutsala umdla wabathengi kunzima kakhulu kunakuqala njengoko ingqalelo isasazeka phakathi kweendlela ezininzi, izixhobo kunye namaqonga. Ukwenza ukuba kube nzima nangakumbi, imiyalezo yosasazo yesiko ayisasebenzi. Abathengi bafuna imiyalezo efanelekileyo ifike kubo ngokhetho lwabo lwesiqhelo kwaye ihanjiswe njengengxoxo. UMike Dover, umbhali-mbhali we WIKIBRANDS: Ukuyila kwakhona iNkampani yakho kwindawo yentengiso eqhutywa ngabathengi
Ngokukhetha okungapheliyo okukhoyo kwi-Intanethi, kunzima ukuphawula ukuba ngawaphi amanyathelo ekufuneka ethathiwe ukuze kwakhiwe isicwangciso esisebenzayo sokubandakanya abathengi ukunceda ukwakha ishishini lakho. Kodwa konke kuyehla ekumiseleni ukuba yeyiphi indlela oza kuyenza. Abathengisi kufuneka benze isicwangciso-qhinga sokungatsaleli abathengi kuphela, kodwa ukwenza ubudlelwane bexesha elide obakhelwe elubala kunye nokuthembela okuya kuthi kuvelise urhwebo kunye nokunyaniseka kwegama.
Nazi ezinye iingcebiso kubathengisi ngendlela yokwakha iqhinga lokuthengisa eliyimpumelelo:
Chonga iindlela ezintsha zokuThengisa
Endaweni yokuchitha lonke uhlahlo-lwabiwo mali lwakho kwintengiso yesintu njengokushicilela iintengiso okanye intengiso zikanomathotholo kunye nomabonakude, jonga kwakhona kumajelo entengiso edijithali anokunceda ishishini lakho likhule kwi-Intanethi. Intengiso edityanisiweyo idibanisa iindlela ezindala zentengiso kunye netekhnoloji yanamhlanje ngokusebenzisa imikhankaso yokuthengisa nge-imeyile, ukubhloga, kunye namajelo eendaba ezentlalo afana neFacebook okanye iTwitter. Abathengi banamhlanje bayatshintsha kwi-Intanethi ukunxibelelana neempawu. Ezi ndlela azikuvumeli kuphela ukuba uphucule ukufikelela kwakho konke, kodwa wandise amathuba akho okudibanisa nabaphulaphuli ababanzi.
Yenza iSicwangciso esiliQili seSiqulatho
Ukwakha ubukho bedijithali malunga nokushiya indawo yedijithali kunye nokufunyanwa ngabathengi abanokubakho. Kwindawo yentengiso yanamhlanje, 70% yabathengi ukhetha ukwazi inkampani ngokusebenzisa ulwazi lokwenyani endaweni yeentengiso. Qalisa ukwakha ubudlelwane obungcono ngokungafihlisi kunye nokuthembela ngokuvelisa umxholo ofanelekileyo, wemultimedia. Abathengi bahlala bekhangela ulwazi kwi-intanethi kwaye endaweni yokudala umxholo ngenxa yokudala umxholo, gxila kumzi mveliso othile kunye nakwizihloko ezichaphazelekayo. Ayisiyokwandisa nje amandla akho okufumaneka kwi-intanethi ngomxholo ofanelekileyo, kodwa kunye nokwakha igama lakho njengegunya elithembekileyo. Yongeza ixabiso ngakumbi kumxholo wakho ngokongeza ezinye iindlela zosasazo ezinjengeefoto, iividiyo, kunye neepodcast- oku kuyakuphucula amathuba akho okufumaneka kwi-Intanethi ngokunika ulwazi olunentsingiselo kubathengi abakhoyo nabakhoyo
Joyina Incoko naBathengi bakho
Ukunxibelelana nabathengi bakho kubalulekile. Nokuba impendulo elula ku-Twitter, ukuphendula imibuzo yabo ngenkxaso yabathengi, okanye ukubanika isivumelwano sangasese sokunyaniseka kwabo, ukubandakanyeka kubalulekile xa usakha ubudlelwane bexesha elide nabathengi. Abathengi banamandla kunye nefuthe elingaphezulu kunangaphambili njengoko i-Intanethi iye yonyusa amazwi abo ukuze iviwe ngezithuba zentlalo, iiforamu kunye nokuphononongwa. Ukumamela kunye nokunxibelelana nabathengi kuvumela abathengisi ukuba baqonde ukuba loluphi uluntu olungena kuzo kwaye zeziphi iincoko ekufuneka beyinxalenye yazo.
Hlaziya iinzame zakho zokuthengisa
Ukuze uqonde ukuba isicwangciso sakho somxholo siqhuba kakuhle kangakanani, kuya kufuneka ujonge amanani. Ngokusebenzisa iinkcukacha kubahlalutyi, unokufumana ukuqonda ukuba zeziphi iiblogi eziphumelele ngakumbi, ukufikelela kuko konke, kwaye zeziphi iindawo ekufuneka uziphucule kuzo. Uhlalutyo lubalulekile xa kusenziwa isicwangciso esiliqili sentengiso yedijithali kuba ekuhambeni kwexesha uya kuba nakho ukuqikelela ukuba zeziphi izinto eziza kwenzeka, loluphi uhlobo lweendaba olwamkela ngakumbi xa kuziwa kubaphulaphuli bakho, kwaye zeziphi iindlela zentengiso ezisebenza kakuhle kwishishini lakho.
Ngaphandle kwesicwangciso-qhinga sokuzibandakanya kwabathengi kwidijithali, abathengisi baya kuqhubeka nokungena kwizikhewu xa kufikwa ekwakheni uphawu lwabo. Endaweni yokugxila kwizibhengezo ezityhalelwa kubathengi, abathengisi banamhlanje kufuneka benze utshintsho kwindawo yedijithali kwaye bakhe izicwangciso zexesha elide ezijolise kuthethathethwano olutsala abathengi.
Ukubeka nje, kuqala ngokwakha iqhinga lokuthengisa elinamandla kunye nokuchonga ukuba zeziphi izixhobo kunye neendlela zokuthengisa eziyimfuneko ekwabelaneni nasekuhambiseni. Ukudityaniswa kokuyilwa kwemultimedia, imidiya yoluntu kunye kubahlalutyi kubalulekile ukuba uphumelele kwi-intanethi nokuba uyishishini elikhulu, ishishini elincinci, okanye nokuba ngusomashishini. Ukuzibandakanya kwakha incoko eqala ngokungafihlisi ngokuthengisa umxholo, ukuvumela bonke abathengi ukuba bakufumane kwi-Intanethi ngemibuzo yokukhangela edibanisa nokubuyela kwindawo yakho.
Indawo yentengiso yanamhlanje ifuna ukuba zonke iimveliso zikhuphisane ngokwamanani kwaye abathengisi abakuqondayo ukubaluleka kokuba nomxholo, abathengi kunye nedatha eqhutywa zezona ziya kuqhuba uphawu lwazo luphumelele.
tags: isicwangciso sokuthengisaiziqulatho zomxholoingxoxoAbaxhasiunyawo lwedijithaliubukho bedijithaliFacebookIntengiso ye-Facebookholonisintengiso ehlanganisiweyoiindlela zentengisoimpumelelo kwezentengisoimpumelelo kwintengiso kwi-IntanethiUmxholo ofanelekileyoincoko yemidiya yoluntuTwitterUkuthengisa nge-Twitter
Kwisikhundla sakhe sangoku, uRichard Hollis ungumnini, umseki kunye ne-CEO ye Holonis Inc., eseSan Diego, California. Ukudibana nonyana wakhe, uHayden Hollis, esi sibini saqulunqa umbono wokudala iqonga lezamashishini elihlangeneyo ngokupheleleyo, lixhomekeke ekuqondeni nakwimigaqo yeholons, umbono wokuba isisombululo ngaxeshanye siyinxalenye kwaye iyonke. IHolonis ixhobisa amashishini abo bonke ubungakanani ngetekhnoloji edityanisiweyo emnandi, elula, kunye neendleko ezifanelekileyo ukuyisebenzisa, injongo engqondweni kukukhathalela kunye nokuqalisa kwakhona uqoqosho lwabo bonke abasebenzisi kwindawo ephambili yotshintsho lwedijithali olukhawulezayo.
UChristoph C. Cemper-Impactana
Jul 3, 2015 ngo-6: 10 AM
Ukuhlalutya iinzame zam zentengiso lelona nyathelo libaluleke kakhulu kum kuba andifuni ukubeka imali kunye namandla kwinto engasebenziyo ngakumbi ukuba ndinokhetho lokubeka iliso ukunqanda loo nto.
Yintoni ebaluleke ngokulinganayo, kwaye uyayichaza loo nto, kukuphuhlisa isicwangciso esifanelekileyo somxholo. Ngokombono wam, oko kufuna ukuqonda imakethi yakho kwaye yintoni esebenzayo, kwaye ngoba. Ngoku ukujonga imiqondiso yezentlalo (i-Facebook, i-Twitter) yinto enye ebalulekileyo, kodwa ndifumene amashishini e-B2B aqhelekileyo kunye nempilo, itekhnoloji, ezomthetho njl.njl. Yinyani leyo. Kodwa ukuthengisa umxholo kuyenzeka nalapho, awuboni nje ngokujonga kwi-buzz yentlalo kuphela. Kungenxa yoko le nto ndakha isoftware yam entsha yokuhlalutya imiqondiso ye-Buzz evela kwiNtlalontle, kunye neempawu zempembelelo (njengokuzibandakanya komntu okwenyani kwizimvo, ukujonga, ukucofa, amakhonkco)
Imveliso ibizwa ngokuba yiMpactana (http://www.impactana.com/ Kwaye indixelela kanye le ndiyidingayo ukuze ndibone ukuba loluphi uhlobo lomxholo obusebenze ngaphambili kulo naliphi na ishishini, nokuba ayiyiyo buzzworthy ”(okt umxholo wekati yentsholongwane). Ndabona kwakhona ukuba ukuthengisa umxholo wam kuphumelele okanye akunjalo. Ikwabonisa ukuba intengiso yomxholo ophumeleleyo ijongeka kanjani yeyam okanye umntu endikhuphisana naye ukuze ndikwazi ukuyisebenzisa njengeyona ndlela ingcono yokwakha kuyo. Mhlawumbi ufuna ukujonga zonke iinketho ngokwakho kwaye undazise ukuba ufumanisa ziluncedo. Ingavuya kakhulu ukuva kuwe.
Jul 3, 2015 ngo-9: 22 AM
Enkosi Cristoph! Ndiza kujonga.